စိုင်းနဲ့ လက်မှတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စိုင်းနဲ့ လက်မှတ်
Posted by Wow on May 30, 2014 in Creative Writing | 51 comments
ကြိုပီးပြောချင်တာကတော့ မကောင်းပြောတဲ့ပို့စ် ဟုတ်ပါဝူးရယ်လို့ …
စိုင်းစိုင်း က အနော်နဲ့ (မဟုတ်ပါဝူး) လက်မှတ်မထိုးဝူး ထိုးမယ်ဆိုတဲ့ကိတ်စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး…..
ပွဲဆူပုံများနှယ် အားရစရာဂျီးးးး အနော်တို့လို အလုပ်မရှိ အွန်လိုင်းတစ်နေကုန် လယ်နေသူများအတွက် ပြောပါဒယ်….
ဒီစာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပီး စိုင်းစိုင်းပိတ်သတ်တွေရော မပိတ်သတ်တွေပါ အတော်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားတယ်….
ဆဲတဲ့သူလဲဆဲ… နားလည်ပေးပါတယ် ဆိုတဲ့သူလဲ ဆိုပေါ့လေ….
ဒီနေ့တော့လဲ လက်မှတ်သွားထိုးတဲ့ Status တွေတက်လာပါတယ်….
အနော်လဲ စိုင်းစိုင်းပိတ်သတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စိုင်းရယ် လုပ်ရက်လေခြင်း၊ ဉာဏ်တိမ်လေခြင်းပေါ့…..
လက်မှတ်သွားထိုးပြန်တော့လဲ ဟယ် စိုင်းလေး ချစ်လိုက်တာ မွမွပေါ့…..
ခုသွေးအေးတော့ ဘာတစ်ခုတွေးမိသလဲဆိုတော့ အနော်သာ (တခြားဘူ့ဂိုမှ ပြောဝူးနော်)
အသည်းနဲ့ အသန်ဖြစ်နေတာ စိုင်းစိုင်းက အနော်တို့ comment တွေအကုန်တောင် ဖတ်ဖြစ်ချင်မှာ ဖတ်ဖြစ်မှာပါ….
သူ့အနေနဲ့ စိတ်ထဲရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ် Celebrity ဆိုတော့ နဲနဲ စတိုင်ထွင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို လူတွေ ဝိုင်းပြောကြတယ်ဆိုတာတော့ သူသတိထားရမယ်… သူ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းက လူအများနဲ့လုပ်ရတာကိုး… အဲဒီတော့ တစ်ခါ အခုနပြောသလို စတိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်စိတ်ပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအချိန်မှာ အခြေအနေတစ်ခုကို recover ပြန်လုပ်ရမယ် တွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ NLD ရုံးသွားပီး လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်….
အနော်တို့ တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် သူ့မှာ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း သီးသန့်ဖီလင်ရယ်လို့ ရှိမှာမဟုတ်တာတော့ တော်တော်လေး သေချာပါတယ်…
ပြောကျိတာလေ… ကိုယ်ကသာ စိုင်းစိုင်းကို စိတ်ဆိုးပီး သူ့သချင်းနားမထောင်တော့ဘူး အားမပေးတော့ဘူးလုပ်လိုက် ပြန်ချစ်ချင်သွားလိုက်… ကိုယ့်ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းက ပြောရမယ်ဆို သူ့စိတ်ထဲ သိပ်ရှိနေမှာ မဟုတ်ဘူးလေ…
တစ်ခါတစ်လေကြ အနော်တို့လဲ ကွကိုယ်ဇတ်လိုက်လုပ်ပီး လောကကြီးနဲ့ယှဉ်စဉ်းစား တတ်ကြပါတယ်…. တကယ်တော့လဲ လူဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ယှဉ်ရင် အလွန်သေးငယ်တဲ့ အမှုန်လေးပါပဲ….
ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုးခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အက်ရှင်တစ်ခုအပေါ်ကို ရီအက်ရှင်က ကိုယ်မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်လာချင်မှ ဖြစ်လာမှာပါ…
ကမ္ဘာမှာ ကိုယ့်ရဲ့တည်ရှိမှုကို မသိသူတွေ အများကြီးရှိသလို၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကကော ကိုယ်ထင်ထားသလောက် ကိုယ့်အပေါ်စိတ်ဝင်စားပါမလား…
ငါသည်သာ ငါ့ဇွတ်လိုက်ဆိုတော့ ကိုယ့်ဇတ်လမ်းမှာတော့ ကိုယ်မင်းသား ပါပဲ… ဒါပေမဲ့ ဘဝထဲကလူတွေမှာ လဲ ဇတ်လမ်းကိုယ်စီနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဇတ်ထုတ်မှာ မင်းသား/မင်းသမီးတွေပဲလေ…
သူများဇတ်ထုတ် ကိုယ့်ဇတ်ထုတ်လောက် ဘယ်စိတ်ဝင်စားကြမလဲ….
မည့်သူ့ကိုမှမရည်ရွယ်ပါ… တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်သင့်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တီလို့ ပြောသူက အနော်မဟုတ်ပါဝူး တစ်ခြားတစ်ယောက်ပါ…
စိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့(စ) ဆိုတော့လည်းးးး;
စိုင်း ကို ချစ်တဲ့
စိုင်း ကို နှစ်သက်တဲ့ ၊
စိုင်း ချစ်သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ လာပါပြီ။ (စိုင်း အောင်တင့် ဟုတ်ဘူးနော်)
စကား အတင်းစပ် အောက်ဆုံး က စကား အတွက် နာ့ ကို ခွက်ဒစ်ပေးပါ။
ချစ်သူချင်း ပေမဲ့ စပါးဈေးက သပ်သပ်ပဲ။
ခါတလေမှာ အပြင်မှာ ဖြစ်နေတာတွေက စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာတွေလောက် မဆိုးပါဘူးးး
ကိုယ်ကသာ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့် အကြောင်း အရာသာ အဓိကဖြစ်ပြီး သူများကိုလည်း ကိုယ့် အကြောင်းကိုသာ အာရုံစိုက်မယ် ထင်နေတတ်ပါတယ်။
ဒီ ကွန်စက်ကို သိပြီးနောက် အနော်လည်း လုပ်ချင်ရာလုပ်ကို ရှေ့နောက်မကြည့်လုပ်ပစ်တတ်တဲ့ လူစားမျိုးဖစ်သွားတာပါပဲ။
ဒီပို့(စ) ရေးသူ မြှောက်ပေးလို့ပါ။
ခုနာတို့ထင်ရာလုပ်လို့ရဘီချွိ… ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ်ထင်သလောက် ကိုယ့်အပေါ် အာရုံမချိဘူးဆိုတော့လေ…
အခုမှ တွေးမိတယ်။ အရမ်းကြိုက်တယ် ကေဇီရေ။
အော် . . .
စိုင်း. . . .
စိတ်မောရပါလားစိုင်းရာ. . .
အနော်ပဲ ပိန်းတာလား မသိဘူး..
အဲ့စာနဲ့ လက်မှတ်ထိုးတာနဲ့ ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်လို့ မရဘူးရယ်..
အနော့်အတွက်ဆို လက်မှတ်ထိုးခြင်းကိစ္စက မနိုင်ဝန်မှ မဟုတ်တာ..
နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ၊ မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့အသက်အရွယ်ရှိနေသူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ လုပ်သင့်တယ်လို့ ယူဆလို့ (စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့) လက်မှတ်ထိုးမယ်.. လက်မှတ်ထိုးခြင်းရဲ့ နောက်မှာလည်း မနိုင်ဝန်ထမ်းစရာ ဘာမှ မရှိဘူး ထင်တာပဲ…
ဘာဒေဖြစ်ကြတာပါလိမ့်.. နိုင်ငံရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးများ ပါသွားလို့လား
စိုင်း ဆိုလို့ ကျုပ်တို့ ငယ်ငယ်က အဆိုတော် စိုင်းဆိုင်မော်ဝ် ကိုတောင် သတိရမိတယ်။
သူ လည်း စိုင်း ဘဲ လေ။
အဲသည့် ငနဲလေးက ကျနော်၏နိုင်ငံရေးတွေဘာတွေ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပြောပြီးမှ…
နောက်ဆုံးတော့လည်း… ခံယူချက်နဲ့ အောင်မြင်မှုကို မလဲနိုင်တာမို့…
ရှေ့မျက်နှာနောက်ကိုထားလို့ E၁ နေတဲ့ မျက်နှာပေးကိုဆောင်ပြီး … ထိုးလိုက်ရပါလေရော…
ဟီ ဟိ… ၄၃၆ ဘာလဲလို့ မေးရင် ချဲနံပတ်လို့ မဖြေရင် ကံကောင်း…
ဆြာကျောက် လမ်းကြုံရင် ကျုပ်အိမ်မှာ သာကူလေး ဝင်သောက်သွားပါအုံးနော်။
ဟုတ်ပါ့… ကိုကြီးခရယ်… အရေးတော်ပုံကာလက…
ဒေါက်တိုမောင်မောင် ပြောတာလေး အမှတ်ရမိသေး…
ထိပ်ဆုံးက ၂ယောက် သာ ထိပ်တုံး ခတ်ပလိုက်ပါဗျာ …
ခုလောလောဆယ် တစ်ကျပ်သားနဲ့ ဒွတ်ခရောက်နေသူကများ
ကြံနေတာက ၂ ပိသာလောက်။
တကျပ်သားနဲ့ တင်မောမောနေတာ မောင်လေး တနားစရာ။
စိတ်ထဲမကောင်းလို်က်တာ ပြောနေဆိုနေလိုက်ကြတာများ ;'(
သူ့ဟာသူ သူ့စိတ်ထဲရှိလို့ ဖြစ်စေ မရှိလို့ဖြစ်စေ ပြောချင်စိတ်ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ သူ့ဟာသူ့ပြောတာကိုပဲ သူစိတ်နဲ့သူပဲကို လိုက်ပြီး ပြသာနာရှာနေကြတာပါလေ
လူတိုင်း ကိုယ့်စိတ်ထဲ ရှိတာတော့ ကိုယ်ပြောခွင့်ရှိတာပဲကို
မန့်တဲ့လူတွေလည်း သူတို့စိတ်ထဲ ရှိတာ မန့်ကြတာဆိုတော့
သူ့သဘော သူဆောင်ပြီး ကိုယ့်သဘောကိုယ်ဆောင်ပါတယ်
ကိုယ်လည်း ကိုယ် ပြောချင်ရာပြောတာပဲလေ
စိုင်းရဲ့ ဖော်အဲဗား ဖန်း
မယ်ပုလေး နာ့ဆီ အလယ်လာတယ်ပေါ့.. မမြင်တာကြာတော့လွမ်းနေတာ
ဂလို… စိုင်းချစ်သူ မယ်ပုချ်ရဲ့ …
သူ့သဘောသူဆောင် သူ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးမို့ ထိုးတာမထိုးတာ သူ့အပိုင်း
ဘယ်သူကမှ အတင်းအကြပ် ထိုးပါလို့တိုက်တွန်းနေတာလည်းမဟုတ်…
အဲဒါကို တိုင်းသိပြည်သိ ဖွဘုတ်ပေါ်တက်ပြီးအာချောင်လို့ ဒီအမှုဖြစ်တာ…
ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကို တန်ဘိုးထားရင် ဒီအတိုင်းနေပေါ့… ဘာဖြစ်လဲ…
အခုမှ တင်ထားတာတွေဖျက် ၊ စကားကိုပြန်ပြင်…
မအီမသာမျက်နှာပေးနဲ့ လက်မှတ်သွားထိုးတော့ ပိုပြီးပြောစရာဖြစ်တာပေါ့…
သတိပေးလိုက်ပါဦးအေ… ဟီ ဟိ
မီးလောင်ရာ အောက်တိန်းလွှတ်တဲ့ ကျောက်စ်
Things always go wrong, try to catch yourself တဲ့ ဟိုနေ့က အမှားပိုစ့်မှာတောင် မန့်လိုက်သေးတယ်
မမှားဘူးတဲ့သူ ရှိသလား ?????
ခံယူချက်တွေ ယုံကြည်ချက်တွေ မယိမ်းယိုင် မဝေဝါး မတွေဝေဖူးတဲ့သူရှိသလား?????
ဒါကြောင့်မို့အမှားဆိုတာ ယူတတ်ရင် သင်ခန်းစာပဲ
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တွေ မပြောနဲ့ ကမာ္ဘကျော်တောင် အုတ်အော်သောင်းနင်း ဂကျိုးဂဂျောင် ပြောချင်တာ ပြောပြီး လုပ်ချင်တာ လုပ်သေးတာ
သူပြောတာ ဝန်ကြီးတွေ ပြောတဲ့ ဟာသတွေလောက်တောင် ရီစရာမကောင်းဘူး
သူလည်း သူနောက်ဘယ်လို ဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုတာ သိသွားမှာပဲ
ပြောပါတယ် အပင်မြင့်လို့ လေပိုတိုက်တာလို့ ဟီး
ဟီ ဟိ သက်သာသလိုသာ ဖြေတွေး…
ဒို့ကတော့ ဝေးဝေးကနေ ဆုတောင်းပေးမယ်…”
ဂွဇက်ထဲက ဆိုင်းချစ်တူတွေကို စ ရတာ ပျော်ထှာ…
မမန့်တော့ဘူးလို့နေပေမဲ့မောင်ကျောက်မန့်တာတွေ့တော့မနေနိုင်လို့မန့်လိုက်ဦးမယ်။ တကယ်တော့လဲစိုင်းစိုင်းက ပညာရှိပဲ။ ဒါပေမဲ့ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲဆိုတာလို့ပေါ့။ အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦးလို မင်းသား၂ပါး ဘယ်သူ့ကိုထီးနန်းတင်ရမလဲဆိုတဲ့အရေးမှာ ကျွန်တော်မျိ ုးကြီးနှာစေးနေပါတယ်လို့အပြောကောင်းလို့လွတ်သွားသလို ကျွန်တော့်ဦးနှောက်သေးသေးလေးနဲ့မနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြားနေမဲ့သဘောမျိ ုးပြောလိုက်တယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်။ ဘာမှမပြောပဲနေရင် သူတို့ကိုမထောက်ခံဘူးလို့ထင်နေမယ်။ပိုဆိုးမယ်။ ပထမရက်က စိုင်းစိုင်းမသွားတော့ fb မှာ-
…Mg Myo Myat စိုင်းစိုင်းဆိုတဲ့ကောင်က ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား ဒါမျိုးကြတော့
Yan Aung Oo အခုထိ မတွေ့သေးတာ စိုင်းစိုင်း နန္ဒာလှိူင် လွင်မိုး
Mg Myo Myat ဒီကောင် ဒီကောင်မတွေက စားဖားတွေပဲ…
ဒီလိုတက်လာလို့စိုင်းစိုင်းက အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦးလို ပညာသားပါပါ အသနားခံတဲ့အနေနဲ့ကြားနေပါရစေလို့ တင်တယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်။
အခုခေတ်ကမရှောင်ရင်လွတ်တဲ့မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီခေတ်လေ။ ရှောင်လိုက်ကာမှပြစ်မလွဲဖြစ်တော့တာပဲ။ လက်မှတ်မထိုးလဲမလွတ် ၊ ထိုးလဲမလွတ်ဖြစ်ကုန်ရော။ အခုသူ့ fb အကောင့်တောင်ပိတ်သွားပြီကြားတယ်။ စိုင်းစိုင်းကိုတော့စီးပွားပျက်အောင်နိုင်ငံရေးသမားတွေဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဦးမယ်လို့ထင်တယ်။
ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ပဲ။ လက်မှတ်မထိုးလို့ဆိုပြီး soft power နဲ့ ကိုယ့်ကိုမထောက်ခံသူတွေရဲ့အကျိ ုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေမယ် အရေးယူဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိပါးတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာအမည်ခံလောက်သာရှိတဲ့ soft power အာဏာရှင်ပဲ။
ဇာတ်လမ်းကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်လာတော့ စိုင်းစိုင်းလက်မှတ်ထိုးတာ တယောက်စာပဲကိုယ်စားပြုလို့စောက်ရေးမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိ ုးတွေရေးလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ တကယ်တော့လည်း လူတိုင်းသိပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေကိုစည်းရုံးတယ်ဆိုတာက သူ့လက်မှတ်တခုတည်းလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ ပုဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုအားကောင်းတဲ့မြန်မာပြည်မှာ အနုပညာရှင်တယောက်ကထောက်ခံရင် သူ့ကိုအားပေးတဲ့ပရိသာတ်ကပါရောယောင် ထောက်ခံတတ်လို့ ပရိသာတ်များတဲ့စိုင်းစိုင်းကို ဖိအားပေးတယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်။ တကယ်တော့အနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အကျိ ုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကြောက်ရသလို အရေးယူနိုင်တဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း ကြောက်ရတယ်။ နိုင်ငံရေးအားပြိုင်ပွဲမှာ အနုပညာရှင်တွေက မြေဇာပင်တွေပါ။
ဆိုင်းဆိုတာတီးရင်မြည်တတ်တယ်။ ၂ခါဆက်တီးတော့အသံနည်းနည်းကျယ်သွားတာပေါ့။ :p
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် အဲဒီလက်မှတ်ထိုးဖို့ကိစ္စလာအော်တာကြားသား… သများဂိမ်းဆော့တောင်မပျက်.. ဖုန်းနဲ့ပေးလို့ရတယ်ပြောတာလည်း မှတ်ထားဖို့နေနေသာသာ… အဲဒါကလည်း တကယ့်ကို ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိ.. ပေါ့ပေါ့နေ..ပေါ့ပေါ့တွေးနေကျမို့.. တသက်နဲ့တစ်ကိုယ် ဘာမဲမှသွား မပေး..ခြေထောက်ညောင်းတယ်.. ငါသွားလဲ ဘာထူးမှာလဲ… သူတို့ဖာသာသူတို့လုပ်ချင်ရင်လုပ်တာဆိုပြီး နေသာသလိုနေခဲ့တာ…မဖြစ်သေးပါဘူး… စာကျက်အုန်းမှ :s:
စာကျက်ပျင်းရင် ရိုက်ခံရမယ်နော် ခွစ်
ဟင့် စိုင်းကလဲ သများကိုတောင်ခေါ်ဘူးဟယ်။ သများသွားထိုးပါ့မယ်ပေါနေဒါဂို :mrgeen: အတူတူထိုးရမယ့်ဟာကို။ ခုတော့ ခုတော့ ဟင့်ဟင့်ဟင့် :byee:
နိုနဲ့… အနော်နဲ့သွားမယ် မွ လာ…
ဟော့ဒီလို အဆဲခံရဲမှ မထိုးပဲ နေလို့ရမယ်ကွ။
ဇတ်လမ်းကိုယ်စီနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဇတ်ထုတ်မှာ မင်းသား/မင်းသမီးတွေပဲလေ…
မိုက်မိုက်က အစားအသောက်လေးတာဝန်ယူပြီး ပြောမယ်ဆိုရင် ရမ်းရမ်း စိတ်ဝင်စားမာ
သာမာန်လူထက် လူသိများတဲ့ စဗျစ်သီးတွေက စကားပြောဆင်ခြင်ရပါတယ်။
ဒါ သူတို့ နာမည်ကျော်အောင်မြင်မှုအတွက် တဖက်ကပေးလိုက်ရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။
(ဒေါ်စုကတော့ ခုထိ တမင်တကာတဖက်သတ်ကြီး စွပ်စွဲကြတာမျိုးကလွဲရင် စကားအမှား၊ဟန်ပန်အမူအရာ အမှား တခါမှ မတွေ့မိသေးပါဘူး။အင်မတန် သတိထားနေရတဲ့ ပုံလည်း မပေါ်ပေမယ့် လုုပ်ရှားတဲ့ ကာယကံ၊ဝစီကံမှုတိုင်းမှာ သတိရှိ၊ဉာဏ်ယှဉ်နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း သူ့ကို လေးစားမိပါတယ်)
ဒီနေ့ စိုင်းစိုင်းလက်မှတ်ထိုးပွဲမှာ တွဲပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ထားကြတာတွေကို ကြည့်ပြီး ချွိ နဲ့ ဝေါင်း ကို တောင် သတိရနေမိတာ။
(ဒေါ်စုကတော့ ခုထိ တမင်တကာတဖက်သတ်ကြီး စွပ်စွဲကြတာမျိုးကလွဲရင် စကားအမှား၊ဟန်ပန်အမူအရာ အမှား တခါမှ မတွေ့မိသေးပါဘူး။အင်မတန် သတိထားနေရတဲ့ ပုံလည်း မပေါ်ပေမယ့် လုုပ်ရှားတဲ့ ကာယကံ၊ဝစီကံမှုတိုင်းမှာ သတိရှိ၊ဉာဏ်ယှဉ်နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း သူ့ကို လေးစားမိပါတယ်) ဆိုတာကို ထောက်ခံပါတယ်။
အနော်တို့က အိုက်လိုမြင်စယာဖစ်နေဘီလား မွ
ဒီသတင်း လဲ သိဝူးကွဲ့။
ဒီဟာလေးကလဲ ကိုယ့် တစ်ကိုယ် အတွက် စကားဝဲပြနေတာပါလား။
တကယ်တော့ ဆိုင်းမထိုးချင်လဲ ရပါတယ်။
ဟာသ လေးတစ်ခု ဆက်ပြောချင်ရဲ့။
ဘူတာရုံတစ်ခု မှာ လူတွေရထားစောင့်နေတုန်း ရထားလာသံလဲကြားရော လူတစ်ယောက်က သံလမ်းပေါ်ကို ခုန်ချလိုက်သတဲ့။
အဲဒီချိန် သူ့ဘေးက လူတစ်ယောက် က အတင်းလိုက်ခုန်ချပြီး သူ့ ကို အတင်း ရထား နဲ့လွတ်အောင် ဘေးကို အတင်း ဆွဲလိုက်သတဲ့။
ဒီတော့ သေကြောင်းကြံတာ မအောင်မြင်လိုက်ဘူးပေါ့။
ဘူတာထဲက ပရိတ်သတ် က ကိုယ့်အသက်ကို ပဓာန မထားဘဲ အတင်းလိုက် ကယ်သူ ကို သူရဲကောင်း အဖြစ် ချီးကျူးထောပနာပြုကြတာ ဒီလူ ရဲ့ အင်တာဗျူးသမား ကို ဖြေတဲ့ အဖြေ ကို ကြားလိုက် ကြရတဲ့ အထိဘဲ။
သူ့အဖြေ ကို ကြားပြီး တော့ လူတွေ မှာ အောင့်သီးအောင့်သက် ရီရမလို ငိုရမလို ဖြစ်ကုန်ရော။
သူ ဘယ်လို ဖြေတယ် ထင်လဲ။
“သူ့ဟာသူ သေကြောင်းကြံ လို့ သေသွားတာက အရေးမကြီးဘူး။ သူ့ အမှု နဲ့ ဒီ ရထားသာ ဆက်မထွက် ရင် ကျုပ် အလုပ် နောက်ကျတော့မှာ မို့ ကျုပ်အလုပ် တော့ အပျက်မခံ နိုင်လို့ အမှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ် လိုက်ရတာဗျို့” တဲ့။
အဲဒီ စိုင်းစိုင်း ကို ကြုံရင် ( မကြုံလဲ ကြုံအောင်လုပ်ပြီး ပြောလိုက်အေ) ပြောလိုက်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ မဖြစ်ဖို့ ခေါင်းထဲ ထည့်စရာမလိုပါဘူး လို့။
သူရဲ့ အခုလက်ရှိ ဝန်ထမ်း နည်းနည်းလေး နဲ့ လုပ်ငန်းအသေးလေး ကို ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖား နေ မျက်နှာချို သွေးနေ စရာ မလိုဘဲ ကိုယ့်အစွမ်းကိုယ့်အစ နဲ့ ပိုပြီး ကြီးမား အောင်မြင် တိုးတက် စေဖို့ အတွက် မျှော်မှန်းပြီး “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” ကို အာဏာရစေဖို့ ပံ့ပိုးပေးပါလို့။
မဟုတ်ဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးဖို့ထက် ပညာမဲ့သူတွေရဲ့ အချုပ်အချယ်တွေကြား သူတို့မျက်နှာကြည့်ပြီး မှ ထမင်းစား နေ ရတာကိုမှ ကြိုက်ရင်လဲ သူ့သဘောပါဘဲလေ။
“​ပေးကမ်​းခြင်​းသည်​ ​အောင်​မြင်​ရာ၏”ပါ……..။ မြန်​မာပြည်​မှာ လုပ်​ငန်​း​အောင်​မြင်​ဖို့ ဘယ်​သူ့ကိုမှ ဖားစရာ မျက်​နှာချို ​သွေးစရာ မလိုပါ။ မူလဘူတ လုပ်​ကိုလုပ်​ရမဲ့ အရာ​တွေပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​…….။:)))
အမှန်တော့ ဆယ်လီဖြစ်နေတာရယ် ခနဲ့သလိုရေးလိုက်တာရယ်က ပြသနာစတာ
တကယ့်တော့ သူလည်းလေ လောကီသားပေမို့ သူ့ခံယူချက်သူရေးတာ ထူးထွေပြီးပြောစရာမရှိပါ
ဒီမို လစ်ဘရယ်လို့ ခံယူထားရင် သူဒီလိုမပြောသင့်ဘူးဆိုတာလောက်နဲ့တင်ရပြီ
တိုက်ခိုက်တာ ပုတ်ခတ်တာမလုပ်သင့်ဘူးလေ လူတယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးပဲ
ဒါသူ့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြောပိုင်ခွင့်
တော်ရုံပဲကောင်းပါတယ် အခုက ဆန်းဆန်းတင့်ဖြစ်လွန်းရာကျပါတယ်
အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာက လူအများအမြင်မှာ အတိုက်အခံဘက်က ဒီမိုတွေ ဆန်းဆန်းတင့်ဖြစ်လွန်းတယ်ဆိုပြီး နာမည်ပျက်နေတာကြာပြီ
အခုပိုဆိုးသွားပြီး အုပ်စုနှစ်စု ကွဲလွဲမှုက ၂၀၁၅ နီးလေ ဆိုးလေ
အာ့မှာဘာသွားတွေ့`၈လည်းဆိုတော့ ဒီမိုတွေဘက်က အမုန်းတရားအခြေခံပြီး စည်းရုံးရေးမှာပညာမပါဘူး
ဝါဒဖြန့်ရာမှာ ပညာမပါဘူးဖြစ်နေတယ် အဘတွေကိုကာပေးနေတဲ့ လော်ဘီတချို့က ပညာရှင်အဆင့်ဖြစ်နေတယ်
အခုစိုင်းစိုင်းကိစ္စမှာပိုဆိုးသွားတယ် ဝါဒကွဲမှုက အရမ်းကိုပြင်းထန်သွားတယ်
အခုကိစ္စ ဒီမိုတွေ တုန့်ပြန်မှုက ပြင်းထန်လွန်းပြီး ပုဂ္ဂလိကဆန်လွန်းတယ်
အရင်ကတည်းက ကောင်မလေးတွေသည်းသည်းလှုပ်နေလို့ ကြည့်မရတဲ့ဓါတ်ခံနဲ့ပေါင်းနွှာတယ်လို့ပဲယူဆပါကြောင်း
ဒီမိုလော်ဘီလို့ နာမည်ကြီးနေသူများ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာကို ကိုယ်ကနမူနာလုပ်ပြနေပြခြင်းနဲ့ စံပြအဖြစ်နဲ့ စည်းရုံးနိုင်ကြဖို့ကို အကြီးကြီးအခုထိမျှော်လင့်မိနေတုန်းပါ
၂၀၁၅ နီးလေ စည်းရုံးနိုင်မှုမရှိလေဖြစ်နေတယ်လို့မြင်နေတယ်
တဖက်က တိုက်ကွက်တွေ အဆင့်တခုအထိအောင်မြင်နေတယ်
ရွာ့ .. ဆိုင်းချစ်သူတွေကို ကလိ အုံးမှပါလေ…
ပြောချင်တာက သည်လိုပါ …ခီညာ …
ဖွတ် တွေ ဒေါင်းတွေ..
ဒီမို တွေ လော်ဘီ တွေ..
ရာသီစာ နဲ့ .. ပရိုပါဂန်းဒါး တွေ ..ခနထားလို့
သည်ဘဲကို လူမုန်းကြလို့ (အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေ)
ဆိုတဲ့အချက်ကလေး ဆိုင်းချစ်သူတွေ ပြောတတ်ကြတာ ကပဲ ..အစ- ဆွဲထုတ်ကြည့်ရအောင်..
ယောက်ျားလေး အများစု.. မုန်းကြတယ်.. လို့ ..အကြမ်းဖျင်း ဆွဲထားတဲ့ကောက်ချက်မှာ..
ဘာလို့ မုန်းသလဲ ..ဆိုတာလေး စတွေးမိတော့…
ချောလို့ စော်ကြည်လို့ ချမ်းသာလို့ အောင်မြင်လို့ ..စသည်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်ကလေးတေ
မင်းသားတယောက် ချောလို့ ..ယောက်ျားလေးတွေ မုန်းကြတယ် ပြောရအောင်
မြန်မာပြည် ရုပ်ရှင်သမိုင်းမယ်.. သူ့ထက် ချောတဲ့ မင်းသားတွေ တပုံကြီး ရှိခဲ့ ထွက်ခဲ့ ထွက်နေ ရှိနေသေးတာပါ…
ဟို နှုတ်ခမ်းမွေး မင်းသားကြီး တို့ … များ .. အဲ့ခေတ်က ယောက်ျားလေးတွေ ငါးခူဖြစ်ကုန်တဲ့အထိ ပေါက်ခဲ့တယ် ကြားဖူးတယ်
ဝိုင်းတော့ အသားလွတ် မမုန်းကြပါဘူးဗျ…
အောင်မြင်လို့ ဆိုရာမယ်. ဟိုဗြုတ်စဗျင်းတောင်း မင်းသားရဲ့ အဖေ တို့ … ဘုန်းကြီး တူအရီး တို့ … ပေါက်ခဲ့ချက်
ကြမ်းတုန်းက အံမယ်.. ရပ်ကွက်ထဲက ငတိတွေ သူတို့ စတိုင် သူရို့ ဒီဇိုင်းနဲ့ခည..
ကိုယ့်ဆြာလေးကတော့ … ခုထိ ကိုယ်ပိုင်ဟန် ဆိုတာ မမြင်ဖူးသေး… သူ့ စတိုင် သူ့ဒီဇိုင်း လိုက်လုပ်ကြတယ်
မမြင်ဖူးသေး … အော်..ချာတိတ်တွေရဲ့ ရက်စပက် မရတဲ့ သဘော..
ဂီတ ဘက်ကြည့်အုံး … သူပေါ်ပီးသည့်နောက် ဂျန်နရေးရှင်းသာ ၃ဆက်လောက် ကူးလာတယ်.. ဘူကဖြင့် …
သူ့ အားကျပါတယ်.. .သူ့ စတိုင် လိုက်လုပ်ပါတယ် သူ့ အထှာ လိုက်ဖမ်းပါတယ် ခုထိ မမြင်သေး…
စော်ကြည်တာတော့ .. ထည့်မပြောနဲ့ခည … ကြားဖူးတာ ..ဟို မမကြီးတွေ ဂျစ်ကားခေတ်က ပေါ့
ဟိုမင်းသားကြီး ရိုက်ကွင်းရှိရာ ..ဟီဟိ…. အဲ့လောက်ပဲ .. ကြည်အုံးမလား .. ထားပါ …
စော်ကြည်လို့ ..မုန်းကြတယ် ဆိုတာထက် …
အပေါ်က အချက်တွေ အရ အချိန်သာကြာလာတယ်.. အရည်အသွေးပိုင်းမယ် ..လေးစားစရာ မမြင်ရရသည့်တိုင်
စော်ကြည်နေလို့ … ချဉ်ကြတယ် မြင်မိပါတယ်။ ပြောပါတယ် အပေါ်မှာ လေးစားစရာအချက်တွေ ရှိလျက်
စော်ကြည် အောင်မြင်ကြရင် ရပ်ကွက်ထဲက ငတိတွေ သူ့စတိုင် လိုက်လုပ်ကုန်မပေါ့ …။ ဒါမိုး ဒါမိုး ..။
ကောင်မလေးတွေ ကြွေလို့ ချဉ်တယ် ဆိုတာက အကြောင်းပြချက် ကိုမဟုတ်တော့ ….။
ယောက်ျားလေးတွေ ပင်ကိုယ်သိ အရသိပါတယ်… စကီလေးတွေဆိုတာ.. ဒီမင်းသားမကြွေရင် ဟိုမင်းသားကြွေမှာပဲလေ..။
ကိုယ်တွေလည်း သည်လိုပဲ ကိုး … ကြွေတိုင်းတော့ လိုက်မချဉ်ပါဘူး …။ ဒီလိုကောင်များ ကြွေရသလားကွာ ..ဆိုတာမျိုးကတော့…
အပေါ်အောက် ရေးထားသမျှထဲ ပါမယ် ထင်ပါတယ်…
မျှမျှ တတဖြစ်အောင် ရေးရရင်… ခုချိန်ထိ အောင်မြင်မှု ထိန်းထားနိုင်တာ ..အလုပ် တန်ဖိုးထား ကြိုးစားတာမျိုး
တော့ကြားဖူးပါတယ်… ဒါကတော့ လေးစားစရာ အချက်ပါ..။ ဒါပေမယ့် ကွာလတီ ပရောဒတ်မဖြစ်လာတာကျတော့…
ဘဝတူပညာရှင်တွေ လည်း မလေးစား …. အထက်ကပြောသလို ချာတိတ်တွေကလည်း ခြားနားတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မလေးစား…
သည်ကြားထဲ … လူမုန်းစေအမြင်ကပ်စေ အထင်လွဲစေမယ့် ကိစ္စ တချို့ တချို့ က ကြုံခဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့လေတော့…
ဝိုင်း ချဉ်ကြတယ် ဝိုင်းဘေကြတယ် ကို ဖြစ်လို့ …
တကယ်တော့ .. ဘယ်သူမပြုမိမိမှု ပါ.. မာတုဂါမကြီးရယ်..
သဘောပါရဲ့လား ကျောင်း အစ်မကြီးရဲ့…
သာဓု သာဓု သာဓု…………..
ဆော်တိုုင်းးးးက ကြည်တာကိုု ဂျေ တာထက်
ကိုုယ်ကြွေ ပြီးးးးး ဥ ထားးးတဲ့ ဆော်လေးတေ က ကြွေ ကြ တာဆိုုတော့ သကောင့်သားးးတိုုင်းးးဂျေ တာ မဆန်းးးး ဘူးးး ပြောရမယ်။
စနိုုဒန် ဇီ ရဲ့ မှတ်တမ်းးး အ ရ ပြောရမယ် ဆိုုရင်င်င်င်င်င်င်
သူတိုု့ ကောင်မလေးတွေ ကကြိုက်လိုု့ သူတိုု့ က စိုုင်းးးကိုုမကြည်ကြောင်းးး
ရွ မင်းးးးသားးးး ၂ ယောက် က ဝန်ခံဘူးးးတဲ့ ချက်ဟစ် ရှိကြောင်းးးး
အစ တုံး ကတော့ ၊ စိုင်းစိုင်း ပြောခဲ့တဲ့ စကား ဖတ်ရသားဘဲ ။
ဘယ်လိုမှကို မ ခံစားခဲ့ရပါဘူး ။ ဘာ တစ်ခွန်းမှလဲ အဘ မ ကဲ့ရဲ့ခဲ့ပါဘူး ။
ဪ ၊ ဒီမိုကရေစီ လေ ။ ဒါ ၊ သူ့ ခံယူချက်ပေပဲ လို့ ။
စိတ်ထဲက တွေးမိတာကိုတော့ ဝန်ခံပါတယ် ။
ဪ ဒီလို အသိုင်းအဝိုင်းက ၊ ဒီလို အတွေးအခေါ် အဆင့်အတန်း မျိုးနှင့်က ၊
ဒီလို စကားမျိုးဘဲ ထွက်တော့ မပေါ့လို့လေ ။
အဘ အသိုင်းအဝိုင်းမှာလဲ ၊ ဒီလိုလူမျိုးတွေ ပုံနေတာဘဲဟာ ။
ဒါပေမယ့် ၊ ပြောတုန်းက ပြောခဲ့ပြီးမှ ၊
နောက်ပိုင်း လူတွေ ဝိုင်း ကဲ့ရဲ့ ကြတာခံကြရတော့မှ ၊
၄၃၆ ကန့်ကွက်ပွဲ ကို မောင်မင်းကြီးသားက ပြေးထိုးတော့ပေသကိုး ။
အင်းးးး ၊ ဒီ တစ်ခါလဲ ၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထုတ်ပြော လှောင်ပြောင်စရာတော့ မရှိလှပါဘူး ။
လူ့ သဘော အရတော့ ဒါမျိုးက ဖြစ်တတ်ကြတာပါဘဲလေ ။
တစ်ခုတော့ ရှိသပေါ့လေ ၊ စိတ်ထဲကတော့ ၊ ဒီ ကောင်လေး ၊
သတ္တိ ဗျတ္တိ နှင့် ခံယူချက် အပိုင်းမှာ တော်တော်လေး ကို အားနည်းတယ် တွေးမိတာပေါ့ ။
မှန်တာပြောရရင် ၊ အဲလို မှောက်ချီ လှန်ချီ လုပ်နေမယ့်အစား ၊
စ ကတည်းက ဘာမှ မပြော ဘာမှ မလုပ်ဘဲ နေတာကမှ တော်အုံးမယ် ။
အခုကျတော့ ၊ စိုင်းစိုင်း က Face Book Account ပါ Deactivate လုပ်ထားသတဲ့ ။
ဪ ၊ ဒီ ကောင်လေး နှယ် ၊ တယ် အရေပြား ပါးရှာတာဘဲကိုး ။
အဲဒီမှာ ၊ ဆက်ပြီး မြင်မိ ၊ သတိထားမိလာတာကတော့ ( စိုင်းစိုင်း နှင့် မဆိုင်ဘူး နော် ) ၊
ဒေါ်စု ကို တိတိလင်းလင်း ဆန့်ကျင်မိတဲ့ ၊ အနုပညာ သမားတွေဟာ ၊
ပြည်သူ လူထုကြီးရဲ့ ဆန့်ကျင်မှုကို ချက်ချင်း ခံရပြီး ၊ အားမပေးတော့ဘဲ ၊
ချက်ချင်း လောက် နီးနီး ကို ၊ ကျဆုံးသွားတာတွေကို အမြဲတမ်း တွေ့နေရတာပါ ။
ဒါကြောင့်လဲ ဒေါ်စု ကို လူထု / ပြည်သူ့ ခေါင်းဆောင် အဆင့်ကို ပေးထားတာကိုး ။
ဒေါ်စု အပေါ်ထားတဲ့ ပြည်သူ လူထု ရဲ့ မေတ္တာဟာ တော်တော် သိသာပေသကိုး ။
အမှန်ကတော့ အခြေခံ အကြောင်းရင်းက ၂ ချက်ထဲရယ်ပါ ။
” ဒေါ်စုကတော့ ခုထိ စကားအမှား ၊ ဟန်ပန် အမူ အရာ အမှား တခါမှ မတွေ့မိသေးပါဘူး။
လှုပ်ရှားတဲ့ ကာယကံ၊ ဝစီကံမှု တိုင်းမှာ သတိရှိ ၊ ဉာဏ်ယှဉ်နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း သူ့ကို လေးစားမိပါတယ် ”
အပေါ်မှာ မ ပဒုမ္မာ ရေးခဲ့သလိုပါဘဲ ။
ဒေါ်စု ဟာ ( ပညာတတ် တွေ ၊ သူတော်ကောင်းတွေ ရဲ့ အမြင်မှာ )
ခုထက်ထိတိုင် အမှားတစ်ခုမှ မလုပ် မပြောခဲ့သေးပါဘူး ။
အဘ အထင် ၊ ဒေါ်စုဟာ အကျယ်ချုပ် ဘဝမှာ တရားထိုင်ရင်း နှင့် ၊
အဆင့်တစ်ခု အထိကို ပေါက်မြောက် အောင်မြင် ခဲ့ပြီးပြီ လို့ ထင်မိတယ် ။
လူ သာမာန်ဟာ ၊ အဲလို မမှားဘို့ တော်တော့်ကို မလွယ်လှဘူး ။
လိုရင်း ပြန်ကောက်ရရင် ၊ ဒေါ်စု က တရားမျှတတဲ့ သူတော်ကောင်း ဖြစ်နေပြီး ။
ဟိုဘက်က ဒေါ်စုကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ စစ်တပ်ဘက်က ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့ ၊
ပြည်သူကို နည်းမျိုးစုံ နှင့် ဖိနှိပ် ညှင်းဆဲ နေပြီး ၊
( ဦးသိန်းစိန် ကြီး ) သူတော်ကောင်း ဟန်ဆောင်နိုင်လှလဲ ခဏ ပါ ၊
ကြောင် ကြာကြာ ရေ မငုတ်နိုင်ပါဘူး ဆိုသလို သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ၊
သူ့ တပည့် စစ်ဗိုလ် အသီးသီး က ဘီလူးအစွယ်တွေ ထုတ်ထုတ်ပြကြတာ ၊
ဝက်ဝက်ကို ကွဲ နေတာဘဲလေ ။
လိုရင်း ပြန်ကောက်ရရင် ၊ စစ်တပ် ကတော့ ပြည်သူတွေ မုန်းတဲ့ ဗီလိန်ပေါ့ ။
အဲဒီ ၂ ချက်မှာ ၊ အဘ စဉ်းစားလို့ မရ ဖြစ်နေတာက ၊
က ။ ဒေါ်စု ကဘဲ တရားမျှတ သူတော်ကောင်း ဖြစ်နေလို့ ၊ ဒေါ်စုကို ပြည်သူက ချစ်တာလား ။
ခ ။ စစ်တပ်ကဘဲ ၊ ပြည်သူကို နှိပ်စက်လွန်းလို့ ၊ ဗီလိန် ဇတ်ရုပ် ပီပြင်လွန်းလို့ ၊
ဒေါ်စုကို ပြည်သူက ချစ်တာလား ။
ဘယ်အချက်ကများ ၊ ပိုသာမယ် ဆိုတာ ၊ တွေးရခက်ကြီး ဖြစ်နေမိတယ် ။
အဘ တစ်ဦးထဲ အမြင်အရတော့ ၊
ခ ။ စစ်တပ်က ဗီလိန် ဇတ်ရုပ် ပီပြင်လွန်းလို့ ၊ ဒေါ်စုကို ပြည်သူက ချစ်တာ ထင်တာဘဲ ။
ရွာသူားတို့ရော ၊ ဘယ်လို ထင်ကြသတုန်း ။
အဘဖော နဲ့ ထင်မြင်ချက်တူပါတယ် နံပါတ် ရ (ခ) ပါပဲ
ကိုရိုစီရေ (ရိုစီလား ရိုစိ လားတော့မသိ)
သူတင်တဲ့စတေ့တပ်တွေအောက်မှာလည်း သူ့အစားပြန်ချေပ ရန်ဖြစ်နေကြတာ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ
အဲဒိမှာဘာသွားတွေ့သလဲဆိုတော့ သူ့ဘက်ကပြောပေးနေတာတွေက သူ့အမာခံတွေ အရင်ကတည်းကအားပေးခဲ့တဲ့သူတွေ
သူ့ကိုဝင်ဖဲ့ကြတာတွေက အခွင့်ကြုံလို့ ပြောလို့ရပဟဲ့ဆိုပြီး အရင်ကတည်းကချဉ်တဲ့ဓါတ်ခံနဲ့ ဝင်ဖဲ့ကြတဲ့သူတွေ
အဲ သူ့အမာခံပရိသတ်တွေက အရင်က အစိုးရဘက်လည်းမပါ
အခုအချိန်မှာ အတိုက်အခံဒီမိုဆိုသူတွေကို အသေချဉ်သွားပြီဆိုတာသေချာသလောက်ပဲ
အခုကိစ္စမှာ ကိုယ်တွေကသာဒီကောင်ကွာ စိတ်ဓါတ်ပျော့လိုက်တာ
ခုတမျိုးတော်ကြာတမျိုး နဲ့ လို့မြင်ပေမယ့်
သူတို့အမြင်မှာ ဒီမိုတွေဖိအားပေးလို့ စိုင်းစိုင်းခမျာ သနားစရာ
လက်မှတ်မထိုးတော့လည်း မထိုးလို့ ထိုးတော့လည်းထိုးလို့ ဝိုင်းပြောကြတယ်
ဖိအားပေးကြတယ် တိုက်ခိုက်ကြတယ် ဆိုပြီး သနားချစ်နဲ့ပိုချစ်ကုန်ကြတယ်ဆိုတာအသေအချာပဲ
အဲ့တော့ စိုင်းစိုင်းသာ အဘတို့လော်ဘီဆိုရင် အခုသူလုပ်ပုံဟာ အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပဲ
ဒီမိုဆိုပြီးတော့ သူတပါးရဲ့အခွင့်အရေးကိုတိုက်ခိုက်သူတွေဆိုပြီး အမြင်ရောက်အောင်သူစွမ်းဆောင်လိုက်နိုင်တယ်
ကျွန်မစိတ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် စိုင်းစိုင်းကွာပျော့လိုက်တာ စိတ်ဓါတ်မခိုင်တဲ့သူပဲ
ယုန်လေးနဲ့ ဆုပန်ထြာတောင် အကောင့်ဒီအက်တီဗိတ်မလုပ်ဘူးဆိုပြီး တွေးမိတဲ့သူပါ
ကျွန်မပြောချင်တာက ၂၀၁၅ နီးတဲ့အချိန်မှာ အတိုက်အခံဘက်တော်သားတွေစည်းရုံးရေးမှာ
ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာ ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် မဲဆွယ်နိုင်တဲ့ပညာလေးနဲ့စည်းရုံးစေချင်တာပါ
ဂလို စိတယ် ..ဆိုင်းကြိုက်သူယီးရဲ့ …
အမာခံတွေ တပုံကြီး.. သည်လိုဖြစ်လို့ မလျော့ဘူး ဆိုတာက နည်းနည်း လွဲသဗျ..
ဘိရုမာပြည် ပေါ်ပျူလေးရှင်း နဲ့ ဖွဘုတ်တော်ကြီး တက် ဂေါ်လီထုနိုင်ကြတယ့် အရွယ် နဲ့ လူတန်းစား ရယ်ကို
အချိုးချ လိုက်ရင်. .. မတပုံကြီးဘူး ဆိုတာ ဘွားကနဲ ပေါ်ပါလိမ့်မယ်..
အစကတည်းက မများတာ … မြို့နေ လူငယ်ဖန်စီကြိုက် ဖြစ်နေတာ သက်သက်ပါဗျာ..
(အဲ့သည့်မှာတင် ဂီတအမျိုးအစားတိုင်းရဲ့ ဟာ့ဒ်ကိုးတွေ မိန်းစတွင်းန် တွေ ခွဲပြောရင် ရှုပ်ကုန်တော့မယ်.. သည်တော့ ထားတော့)
လျော့မလျော့ ကတော့ .. အဘဖော ပြောတဲ့ အရေခံပါးတဲ့ အချက်လေးတွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် မြင်မှာပါနော…
(အရင့် အရင်က .. ပါးခဲ့ .. ရင့်ခဲ့ တာတွေ မပြောသေးဘူး)
သည်ကိစ္စမှာ အတိုက်အခံတွေ ဆွယ်တဲ့ ဘက်မှာ ရေချိန် နိမ့်နေတယ် တော့ မမြင်ဘူး…
ကဗျာဓါတ်ဖမ်းသူ တချို့ နဲ့ သတင်းဓါတ်ဖမ်းသူတချို့ ဆီက မှတ်တမ်း စခရင်ရှော့တေ (ကျုပ်ဆီတောင်ရှိသေး)
အထောက်အထားအရ … သည်တချီ သူ့စတန့် မှာပေါ်လာတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်း ကို ရိုက်ချက်ပြင်းကြတာ အတော်များသမို့
ဟုတ်တယ်လေ..သည်ဘဲက မိုးပြော ကြိုးပြော ပြော… ပီးတော့လည်း ဖိအား မခံနိုင်
ထိုးလည်း +၁ မထိုးလည်း -၁ သာမို့ လက်မှတ်ရဲ့ ရလာဒ်ပိုင်း မထိခိုက်ပေမယ့်..
တကယ်ထိခိုက်တာ .. သူဖြစ်သွားတယ်ခည..
သူ့ဘက်ကနေပီး အော်.. ထိုးလည်း ထိုးပေးလိုက်ရသေးတယ် လို့ ပြန်ရန်တွေ့ကြတော့ … အဲ့မှာပိုအထိနာသွားတာခည..
သွသူ အေးဆေး နေနိုင် စားနိုင်ရက်နဲ့ …ဦးနေးချားပြောတဲ့ အတိုင်း မြေဇာပင် ဖြစ်နေတဲ့ ဘဝမှာ
အနေအထိုင်မတတ်တော့ ပရိုဆိုင်းဆိုင်း Vs အန်တီဆိုင်းဆိုင်းပွဲ နဲ့ … မဟာအရှက်တော် ကွဲသပေါ့ဗျာ..
သည်အခြေမယ် ပရိုတွေက အပင်မြင့်လေတိုက် တို့ … ချဉ်လို့ ဂွင်မို့ ..ဝိုင်းကျွေးတယ် တို့ ကလွဲ ရင် ပြောစရာ မရှိတဲ့အချိန်မှာ..
အန်တီတွေက သူလား ..အင်း ဘယ်တုန်းက ဘယ်လို ဘယ်ကွေ့ မယ် ဘယ်အချိုး သည်ဘဲ အကျင့်က ဒါမိုး ဆိုတာတွေ ထုတ်လာတာကြောင့်လို့လည်း သိရပါတယ်လေ… (သိချင်ရင် ပြဘာ့မယ်…)
ဆိုင်းချစ်သူများ ဆဲဇီသဒီး ..
စိုင်းစိုင်းကို အရေပါးတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးထင်တယ်။ ရာဇဝင်ကိုပြန်ကြည့်ရင်အနုပညာရှင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့တိုက်ပွဲမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကခုချိ်န်အထိပွဲတိုင်းကျော်အလဲထိုးနိုင်ခဲ့လို့ အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကြောက်ရတယ်။အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ တကယ်ထောက်ခံတဲ့သူရှိသလို ကြားနေလိုသူတွေလဲရှိမယ်။ စိုင်းစိုင်းရေးထားတာက ကျွမ်းကျင်ရာလိမ္မာ လို့ရေးထားတော့ သူနိုင်ငံရေးနားမလည်လို့ ကြားနေခွင့်ပေးဖို့ပြောတယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖေ့ဘုတ်မှာတက်လာတဲ့ကွန်မန့်တွေက ဆော်နေကြတော့ အခြေအနေမကောင်းတော့ ကြားနေလို့မရတော့ဘူးလို့သိလိုက်တယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့လက်စွမ်းကိုသိတော့ ကြာရင်ထမင်းအိုးကွဲသွားနိုင်တယ်လေ။ အနုပညာရှင်တွေက ကိုယ်ထမင်းအိုးတော့ဘယ်အကွဲခံနိုင်မလဲ။ ဒါကိုအရေပါးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ အရေထူလို့သူထမင်းအိုးကွဲသွားရင်ဘယ်သူကလာကြွေးမှာလဲ။ တကယ်တော့လဲသူ့ဝမ်းစာသူရှာစားနေတာပဲ။ သူ့ထမင်းအိုးအကွဲမခံနိုင်တာ အပြစ်ပြောလို့မရဘူး။
လက်မှတ်ထိုးတာတောင်ဘာဖြစ်လို့ ဝိုင်းချဲရလဲလို့စဉ်းစားမိတယ်။ စဉ်းစားလို့ရသလောက်တော့ အလိုက်တသိလာမထိုးတဲ့အတွက် ဒီမိုကရေစီစောက်မြင်ကပ်ပုဒ်မနဲ့ညိသွားတာဖြစ်မယ်။ :p
” ၃ ။
ဪ ၊ ဒီ ကောင်လေး နှယ် ၊ တယ် အရေပြား ပါးရှာတာဘဲကိုး ”
ကို Nature ရေ နားလည်မှု လွဲမှာ စိုးလို့ပါ ။
ကျနော် ရေးထားတာက ၊ စိုင်းစိုင်း ကို အရေပြားပါး ရှာတယ် ထင်မိတာ ၊
သူ့ Face Book Account ကို Deactivate လုပ်လို့ပါ ။
မှောက်ချီ လှန်ချီ လုပ်ပြီး ၊ ၄၃၆ ကို ပြေးထိုးလို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
( သူတို့ ခမျာ မှာ ၊ လူအများ ကြိုက်မှ ထမင်းစားရတဲ့ ဘဝ ဆိုတော့ ၊
ခမျာ များ ၊ လူအများ အကြိုက် ကို မလွန်ဆန်ဝံ့ဘူး ဆိုတာ ၊ သိပါတယ် )
ကျနော့်အမြင်ကတော့အကောင့်ပိတ်တာသူ့အတွက်ခံစစ်ပိုလုံတယ်။ မပိတ်ရင် လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြစ်ခံရလို့ စိစိညက်ညက်ကြေသွားနိုင်တယ်။ အခြေအနေမကောင်းရင်ပေခံမနေရဘူး ။ နောက်တလှမ်းဆုတ်ပေးရတယ်။ စစ်ဆင်ရေးလုပ်ရင်ကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးတဲ့သူရဲ့ strong point ကိုထိတ်တိုက်မရင်ဆိုင်ရဘူး။
ဟီးးးး ပြောချင်တာတစ်ခြား ဆွေးနွေးချင်တာတွေ ဆွေးနွေးသွားလိုက်ပုံများ….. မယ်ဝါးတို့ ချက်ကောင်းထိအောင် ပြောတတ်ချက်များရယ်…..
တဲ့တဲ့ ပေါလိုက်တာ အေးတယ်လို့။
ပြီးမှ ချောင်းရိုက်ခံရလည်း နာမည်ကြီးတာပေါ့။
နိ ဟိုပိုက်ဆံမှာခေါင်းနှစ်ခေါင်းပါတဲ့လူရီးကို တဲ့တဲ့ပေါရဲလား ပေါ…
အာ့က နဒို့ က တစ်နိုင်ငံထဲဆိုဒေါ့ကာ။
ပြီးတော့လေ နာ က တစ်ယောက်တည်းသွားလာနေရတာ ဆိုဒေါ့ကာ။
ပြီးတော့ ၅၀ဝ အသွားအပြန်နဲ့ ၄ဝ သမား ဘူက သိတ္တိပိုရှိမတုန်းဆိုဒေါ့ကာ။
အချစ်ပွဲတစ်ရာနွဲလိုက်ချင်ရဲ့ စစ်တစ်ပွဲတော့မနွဲချင်တော့ဝူး… ဆိုလား… တွံတေးသိန်းတန်ဂျီး သချင်း ကြားဖူးဝူးလား